Berito oo loo dabbaaldeggayo maalinta qaranka Iswedhen iyo xafledo loo qabanayo dadyowga dhalasha qaatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Boqorad Silvia iyo boqor Carl Gustaf sannadkii hore ugu dabbaaldeggaya maalinta qaranka magaalada Visby. Foto: Karl Melander/ Scanpix
Berito oo loo dabbaaldeggayo maalinta qaranka Iswedhen iyo xafledo loo qabanayo dadyowga dhalasha qaatay
Maxmuud "Iswedhen waa qarankeyga labaad"
La daabacay onsdag 5 juni 2013 kl 14.18
Maalinka beriya lixda bisha Juni waa maalinta loo dabbaadeggo maalinta qaranka Iswedhen. Meelo badan oo kamid ah dalka waxaa lagu qabanayaa xafled lagu weeyneynayo dadka sannadkaan qaatay dhalashada Iswedhen.
Xafledaan waxaa soo qaban qaabiya degmooyinka dalka kuwaas oo musik iyo qodbaddo ku soo dhaweeya dadyowga la siiyey sannadkaan dhalashada Iswedhen.
Degmooyinka xafledaha noocaan ah qorsheynaya waxaa kamid ah degmada magaalada Göteborg, degmadaas oo sannadkaan ay dhalashada Iswedhen qaateen dadyow gaaraya 950 ruux. Waana markii todobaad oo xafledaan oo kale lagu qabto bartamaha mnagaalada Göteborg. Camilla Carlefall oo madax ka qaban qaabada xafledaan ayaa aaminsan in xafledaan ahaan doonto mid raagta.
- Xafleda waxaan u qabanaa sidii dadka dhalashada la siiyey u soo shaacin laheyn bulshada kugu soo dhaweyn laheyn. Arintaan waxay noqotay mid dhaqan ah. Waa la dareemaya runtii sabab kasta ruuxa ha u dalbadeeda dhalashada in xafledaan tahay arin weyn oo ay dadywoga ku faraxsanyahiin. Waa arin calaamad u noqotay magaalada waana sii waddi doonaa, ayey Tiri
Goorma ayaa qaadatay dhalashada dalka Iswedhen?
1-2 sanno ka hor
3-6 sanno ka hor
6-10 sanno ka hor
10-20 sanno ka hor
Aan dhashayba waan heystey
Weli ma qaadan
Fakta: maalinta qaranka
6 juni sannadkii 1523 waxaa loo doortay Gustav Vasa in uu noqdo boqorka Iswedhen
Lixda Juni 1809 waxaa Iswedhen laga hirgeliyey dasturka haga dowladda markii ugu horeysey.
1916 waxaa markii ugu horeysey loo dabbaaldeggay maalinta calanka oo noqotay lixda juni.
Bilowgii qarnagii 1900 Iswedhen iyo waddamo faro ku tiris ah Yurub ayaan laheyn maalin loo dabbaaldeggo qaranka.
1983 ayey 6 juni noqotay maalin la xuso qaranka Iswedhen.
2005 ayey maalinta qaranka noqotay maalin fasax